सुन आउने नयाँ बाटो
केही साता अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको आयात कम गर्न बैकहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेछ । सुनको आयात घटाउन त्यसो गरेका अरे ⁄ सुनजस्ता अतिपवित्र चिजको पनि आयात किन घटाउनु ? आयात घटाउनु नै थियो भने विदेशी भूमिमा उब्जिएका र विदेशीले छोएका अशुद्ध खाद्यान्न वा लत्ताकपडाको आयात घटाउने उपाय गरेको भए हुन्थ्यो । धर्मभीरु हुन् वा धेरै गहना देखाएर फुर्ती देखाउनेहरू हुन्, नेपालीलाई कदमकदममा आवश्यक सुन रहेको आयात पनि घटाउने हो र ? राष्ट्र बैंक न ठहरियो । उसले कहिले कसको कुरा सुन्छ र ?
यो नयाँ निर्देशनपछि त बजारमा भएका सुन पनि हरायो अनि कति मानिसहरूको विवाह रोकियो । देश विदेश गएर घर फर्कनेहरूलाई उनीहरू बाहिर हुँदा गरेका बिटुलो कामबाट चोख्याउन घरपरिवारले ‘सुन पानी’ छर्किन पाएनन् । त्यो भयो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पाटो ।
यस्तो बन्देजको आर्थिक पाटो झन् भयावह छ । कति लगानीकर्ताका लागि बाँकी एउटै सुनौलो लगानीको क्षेत्र यस बिच्छुकी निर्णयले गुमाइदियो । ‘देशको पैसा जति सुन किन्नमा खर्च भयो । देशभित्र नगरेको खडेरी प¥यो, त्यस्तो संकट रोक्न सुन आयातमा कडाइ गरेको हो’ भन्ने तर्क अहिले गभर्नरकै लामो खडेरी ब्यहोरिरहेको राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।
सुन किन्न खर्च भइरहेको पैसाको खोलो अब चाहिँ कतातिर बग्ला त ? धेरै बुजु्रक अर्थशास्त्रीहरू यसबारे माथापिच्ची गर्दैछन् ।
वर्ष ५, अंक २५, २०६६, फागुन १०–१६